Tsaho iray tsy misy dikany milaza fa miasa amin'ny console console portable i Apple Avy amin'ny mac aho
Ignatius Room | | Apple products, tsaho
3 taona lasa izay, Apple dia nametraka patanty iray izay milaza fa mety ho liana amin'ilay orinasa any Cupertino mamorona console anao manokana amin'ny alàlan'ny fahitalavitra Apple. Na izany aza, toa farany dia nahena ho Apple Arcade ny fanoloran-tenan'i Apple amin'ny lalao, na dia mety hiova aza izany amin'ny ho avy.
Ny tsaho farany, avy amin'ny iPhoneHacks, amin'ity lafiny ity, dia manolotra fa Apple dia mety miasa amin'ny a console azo entina miaraka amina endrika mitovy amin'ny Nintendo Switch, miaraka amina GPU avo lenta ary izany koa dia hanolotra fanohanana ny teknolojia fitiliana taratra, araka ny filazany avy any Korea.
Ity console ity dia ho sokajy vokatra vaovao ary, raha mijanona tsy mieritreritra isika, tsy misy dikany izany. Androany, azontsika atao ny mamadika ny iPhone ho lasa console azo ampiasaina amin'ny fampiasana ny fifehezana Razer izay manodidina ny fitaovana amin'ny alàlan'ny fametrahana bokotra fanaraha-maso amin'ny lafiny roa amin'ilay fitaovana.
Ity fampitaovana ity dia manambara fa ny processeur hitantana ity vokatra vaovao ity Tsy ny andian-dahatsoratra A na MFa kosa, mety ho chip vaovao tanteraka natao indrindra ho an'ny lalao ahafahanao mankafy lalao avo lenta amin'ny kalitao avo indrindra.
Milaza ilay boky fa Ubisoft dia mety ho iray amin'ireo studio natokisan'i Apple mamorona lohateny triple A., ny mpamorona lohateny toy ny Assassin's Creed saga, Far Cray ary Watch Dogs. Azo inoana, na farafaharatsiny manana ny lojika rehetra eto amin'izao tontolo izao izy, fa hanolotra fanohanana an'i Apple Arcade ihany koa.
Lalao tsy misy amin'ny macOS
Raha heverintsika fa maro ireo mpamorona tsy miloka amin'ny macOS rehefa mandefa kinova amin'ny lalao satria manana a mampiasa Metal fa tsy OpenGL na Vulkan toy ny amin'ny sisa amin'ireo lampihazo, izay manome toky an'i Apple fa ny mpandraharaha dia miloka amin'ity console ity.
Raha izany dia tsara ho an'ny mpampiasa Mac izany, angamba afaka nankafy anaram-boninahitra mitovy amin'izany ihany koa izy ireoraha mbola te hampihatra ny fanohan-kitendry sy totozy ny mpamorona. Maimaimpoana ny manonofy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » tsaho » Tsaho tsy mitombina milaza fa miasa amin'ny console amin'ny finday i Apple